Glass Lewis dia miara-miasa amin'ny Arabesque mba hanatsarana ny fahatakarana maharitra ho an'ny mpampiasa vola sy orinasa
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Glass Lewis dia miara-miasa amin'ny Arabesque mba hanatsarana ny fahatakarana maharitra ho an'ny mpampiasa vola sy orinasa
Arabesque, mpitarika manerantany momba ny angona ESG sy ny fahitana, ary i Glass Lewis, mpamatsy vahaolana amin'ny fitantanana manerantany, dia nanambara fiaraha-miasa stratejika vaovao hanomezana mpamatsy vola sy orinasa lehibe indrindra manerantany amin'ny fahaiza-manao maharitra momba ny fifidianana ho an'ny mpisolo toerana. fifamofoana
Ny fiaraha-miasa dia hahita Arabesque manome ny mombamomba ny ESG an'ny orinasa momba ny tatitra fikarohana Proxy Paper ao amin'ny Glass Lewis, ahafahan'ny mpanjifa mahazo ny angona ESG farany sy ny fomba fijeriny ireo orinasa maherin'ny 8,000 manerantany, ary ny fahazoana miditra amin'ireo vahaolana momba ny toetrandro sy ny lalàna mifehy. Mampiasa angon-drakitra lehibe sy fomba fiasa algorithmika iray, ny fahaizan'i Arabesque dia misarika data data ESG maherin'ny efatra tapitrisa isan'andro avy amin'ny loharanom-pahalalana maherin'ny 30,000 ho an'ny mari-pahaizana momba ny faharetana, anisan'izany ny fampifanarahana net-zero orinasa.
Tonga ny fanambarana rehefa mitombo ny fahalianan'ny mpampiasa vola amin'ny fampahalalana ESG, miaraka amin'ny ampahatelon'ny fananana eo ambany fitantanan-draharaha ankehitriny no mampifangaro ny fandinihana maharitra, ary ny ampahadimin'ny orinasam-panjakana lehibe indrindra 2,000 manerantany hihaona amin'ireo tanjona kendrena aotra alohan'ny COP26 UN Climate Konferansa fanovana.
Raha niresaka momba ny fanambarana androany, Dr Daniel Klier, filohan'ny Arabesque, dia nilaza hoe:
"Tao anatin'izay taona faramparany izay, dia nanatri-maso ny fiakaran'ny ESG tsy mbola nisy toy izany izahay ho toy ny fironana mega izay mamorona indray ny tsena eto an-drenivohitra, miaraka amin'ny fananana ESG maneran-tany izay hihoatra ny $ 50 trillion hatramin'ny 2025. Ary mitarika ny fitakian'ny mpampiasa vola hahitana fivelomana sy mangarahara izany. angon-drakitra ahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa ary manatsara ny fitantanana ireo risika sy tranga mety hitranga amin'ny ESG. ”
“Amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo angon-drakitra ESG tarihan'ny teknolojia arabo sy ny fahitana miaraka amin'ny tatitry ny fikarohana nataon'ny Proxy Paper izay nalaina an-tsena ao amin'ny Glass Lewis, ity fiaraha-miasa stratejika vaovao ity dia ahafahan'ny mpampiasa vola lehibe indrindra manerantany hanafaingana ny famakafakana mazava kokoa ny fahombiazan'ny orinasa maharitra. Mientanentana izahay hanome ny vahaolana hahasoa ny tompon-tany rehetra. ”
Dan Concannon, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra ao amin'ny Glass Lewis, dia nilaza hoe:
“Ny mpamatsy vola sy ny orinasam-panjakana eran'izao tontolo izao dia miankina amin'ny fahitana avy amin'i Glass Lewis handraisana fanapahan-kevitra lehibe momba ny fitantanana. Ny olan'ny ESG dia nanjary fanamby mitsikera mitaky fandinihana lalindalina kokoa ny fahombiazan'ny orinasa maharitra. Mino izahay fa ny fiaraha-miombon'antoka stratejika miaraka amin'ny Arabesque hanomezana hevi-dalina lalina sy fidirana amin'ny ESG, ny toetrandro ary ny angon-drakitra mifehy dia ho lasa fitaovana lehibe amin'ny fizotran'ny fitantanan-draharaha. ”
Mpanjifa andrim-panjakana maherin'ny 1,300, ao anatin'izany ny ankamaroan'ny drafitra fisotroan-dronono lehibe indrindra, ny vola ifanaovana, ary ny mpitantana fananana mitantana vola mitentina 40 tapitrisa tapitrisa tapitrisa vola, mampiasa vahaolana amin'ny fikarohana sy teknolojia an'i Glass Lewis hampahafantarana sy hanamorana ny hetsika fitantanana orinasa.